KhunMoung ' s: 2008
Published by KhunMoung 10 comments
Labels: Applications, Software, this-n-that, မှတ်စုများ
For better view, download the pdf file at fileden or mediafire.
source: fine-leaves Blog
အရင်က torrent တွေကို ရှာဖြစ်တာက Mininova.org မှာပါ။ အခုဆိုဒ်အသစ်တစ်ခုကို တွေ့တယ်။ www.youtorrent.com တဲ့။ Mininova ထက် ပိုစုံတယ်။ သူ့ SE ကို ပိုကြိုက်တယ်။ torrent ဆိုဒ်တွေအကုန်လုံးကို မွှေပေးတယ်။ seeds n peers တွေကို cronological order အတိုင်း စီစဉ်ပြတယ်။ seeds n peers တွေကို torrent သုံးဖူးသူတိုင်း သိကြပါတယ်။ torrent update တွေကို မကြာသေးခင်အချိန်က update တွေကို အရင်ရှာပေးတယ်။ SE တစ်ခုချင်းအလိုက်လည်း စုစည်းဖော်ပြပေးတယ်။ ကောင်းတာတစ်ခုက Mininova မှာ မတွေ့တဲ့ ဖိုင်တစ်ခုကို TorrentSpy,BitTorrent,isoHunt အစရှိသဖြင့် တစ်ဆိုဒ်ပြီး တစ်ဆိုဒ် လိုက်ရှာနေစရာ မလိုတော့ဘူး။
နောနော် - မင်းမသိဘူး
Credit to KhunGyi
Published by KhunMoung 13 comments
UltraSlim UltraThin Innovation
Steve Jobs' Slim and Thin Jobs
Detail at Apple's Site
Precaution: Dangers of crossing the street while listening to music
Ad Campaign performed by the New South Wales Police Force in Australia
Link via Blog.Wired
FaceBook Users တွေရဲ့ပေါင်းဆုံရာ IM Messaging Client ... Social.im တဲ့ ... အသစ်တကာ့ အသစ်လို့ပြောရမယ်။ Launch လုပ်တာ မနေ့ကမှ စလုပ်ပါတယ်။
ပလန်းနက်ကို ဝင်ဖတ်နေကျပါ။ ဖျော်ဖြေရေးတွေ၊ နိုင်ငံတကာတွေ၊ ပြည်တွင်းသတင်းတွေထက် နည်းပညာသတင်းတွေကို ပိုစိတ်ဝင်တစား ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ဖြစ်တိုင်း မျက်စိစပါးမွေးစူးစရာ တွေ့ရတယ်။ နည်းပညာသတင်းတွေမှာ Comments တွေက နည်းပညာအသစ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မဆိုင်တဲ့သဘော၊ နည်းပညာအသစ် မိတ်ဆက်တာကိုလည်း အလကားပါ၊ အလှမ်းအဝေးကြီးပါ ဆိုတဲ့ သဘောဆောင်တဲ့ Comments တွေကိုပဲ တွေ့ရများတယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က System Software Upgrade လုပ်လိုက်တယ်။ Vista တင်ပြီး MB Drivers တွေထည့်တယ်တဲ့။ XP Drivers တွေကို ထည့်တာ ရှောရှောရှုရှုသွင်းလို့ ရပါတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ Reboot လုပ်တော့ BSOD ပြနေရော။ မတက်တော့ဘူး။ Safemode with CmdPrompt ကနေ rstrui ပြန်လုပ်လိုက်ရတယ်။ ခုတော့အိုကေ။
For those who love Mozilla , and For those who hate IE that much
Firefox Rise Up Viral Video
There is video footage in that video featuring that , compared to IE users , FireFox users are:
Mozilla VP Marketing Paul Kim gave an explanation about that viral campaign at the blog of TechChrunch.
Source: TruthAboutMozilla , TechChrunch
Labels: Songs, Tech
Here Comes Another Bubble, Web2.0 သီချင်းကို တစ်ခါတင်ဖူးပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ Digg Song ဗျာ။ Kina Grannis ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ရေး၊ဆို၊တီးထားတယ်။ သီချင်းတွေ ယူကျုမှာတင်ပြီး အသံသွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဆက်သွယ်တဲ့အထိ အောင်မြင်မှုရလာတယ်။ ယူကျုမှာ Account သက်တမ်း တစ်လပဲ ရှိသေးတယ်။ လူသိများနေပြီ။ အခုပြောတဲ့ Digg Song က Digg.com အကြောင်းကို ရေးထားတာ။ Funny Song တစ်ခုပါပဲ။ အမေဇုံမှာတောင် သီချင်းတင်ပြီး ရောင်းနေပြီ။ ယူကျုမှာ သူ့တခြားသီချင်းတွေ ရှိသေးတယ်။ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး။
Here Comes Another Bubble, Web2.0
Link Via Dr Shock MD PhD
Blog Readability Test ဆိုတဲ့ Blogtoy ကိုတွေ့ဖူးနေတာကြာပါပြီ။ တခြားဘလော့ဂ်ဂါတွေ စမ်းသပ်ထားတာတွေကို တွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစမ်းသပ်ချက်က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကို မသိတာရယ်၊ သိပ်ပြီး အယုံအကြည်မထားတာရယ်ကြောင့် စမ်းကို မစမ်းဖြစ်ဘူး။ အခုတော့ စမ်းကြည့်လိုက်တာ Genius Level ရှိပါတယ်ဆိုပြီး ပြပါတယ်။ Level တစ်ခုချင်းဟာ ဘလော့ဂ်ရေးသူနဲ့ ဖတ်ရှုသူကြား ပြောင်းပြန်အချိူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခြေခံပညာရေးအဆင့်နဲ့တင်ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုကို ဘယ်သူမဆိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်သလို တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အဆင့် ပညာအရည်အချင်းရှိမှ ဖတ်လို့ရမယ့် ဆိုဒ်တစ်ခုကို ဖတ်ရှုသူနည်းပါးသွားမှာပါပဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆိုလိုတာပါ။ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ဘယ်လောက်အဆင့်လဲ ဆိုတာ အဲဒီမှာ စမ်းလိုက်ရင် စက္ကန့်ပိုင်းပဲ ကြာပါတယ်။ အဖြေပြန်ပေးပါတယ်။ ဘလော့ဂ်မှာ မြှုပ်ဖို့ HTML Code တစ်ခုပြန်ပေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီစမ်းသပ်ချက်ဆိုတာက Just for Fun သဘောမျိူးပါပဲ။ ဆိုဒ်တစ်ခုကို ဖတ်ရှုဖို့ ဖတ်ရှုသူရဲ့ အရည်အချင်း ပညာရေးအဆင့်ကို ဘယ်လို ဆန်းစစ်မှာလဲ။ ဘယ်လို Criteria တွေနဲ့ တိုင်းတာမှာလဲ။ စာလုံးအရေအတွက်နဲ့လား။ စာပိုဒ်ဘယ်လောက်ရှည်လဲဆိုတာနဲ့လား။ ခက်ခက်ခဲခဲစကားလုံးတွေ ပါမပါဆိုတာနဲ့လား။ Page Rank နဲ့တွက်မှာလား။ နောက်တစ်ခုရှိတာက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဖွန့်တွေနဲ့ ရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကိုဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဒီ Readability Test ဆိုတာကြီးက ဘာမှ Serious ဖြစ်နေစရာ မရှိပါဘူး။ Just4Fun ပါပဲ။
ရှာရှာဖွေဖွေ မွှေမွှေနှောက်နှောက် တခြားဆိုဒ်တွေကိုလည်း စမ်းကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်။
1)Cnet.com: Junior High School
2)CNN.com: Junior High School
3)Foxnews.com: High School
4)msnbc.msn.com: High School
5)Techchrunch.com: Junior High School
6)Plaent.com.mm: Elementary School
Slide Show Embedment on web page
Google Doc n Presentation can be embedded as Slide Show on any web page now.